Kooxda Waayaha Cusub Oo Holand Iska Dhiibtay+ video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kooxda Waayaha Cusub Oo Holand Iska Dhiibtay+ video
Kooxda Waayaha Cusub oo 21-kii Sep. bandhig caalami ah ay kaga qeybgaleen magaalada Amsterdam ee dalka Holland, ayaa markii uu dhamaaday bandhigaasi kadib is dhiibeen, subaxnimadii Isniintii lasoo dhaafay. waxayna hadda ku sugan yihiin xerada qaxootiga ee Ter Apel .
Kooxda Waayaha cusub oo madaleysay dalkeena Somalia ayaa waxay soo bandhigeen mid ka mid ah heesahooda ka hadleysay nabadda, maadaama showgaan uu ahaa mid ku saabsanaa maalinta nabadda aduunka 21 Sep.
Kooxdan oo ka kooban ilaa Shan qof oo kale ah Falis Abdi, Digriyow, Lixle, Ahmed iyo Burhan, ayaa waxay Amsterdam ku yimaadeen casuumaad rasmi ah si ay ugu qeybgalaan xafladaasi caalamiga ah ee ay soo qaban qaabisay Master Peace, taasoo lagu qabtay magaalada Amsterdam 21-kii bishan September.
Imaanshaha Holland ayey u aheyd fursad qaali ah oo in mudo ah ay sugayeen kooxdaani ka kooban Shanta qof. Gudoomiyaha kooxdan Shiine Akhyaar ayaa isagu bilooyin ka hor iska dhiibay dalka UK oo uu weydiistay magangalyo, isagoo dalkaasi ku tagay howlo faneed. Waa markii ugu horeysay oo tiro intan la eg oo koox fanaaniin Soomaaliyeed ah ay iska dhiibaan dal ka mid ah Midowga Yurub.